उम्मेदवारको एजेन्डा समृद्ध घोराही उपमहानगर «
यही आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर नागरिकका घरदैलोसम्म पुगिरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू मतदान आफ्नो पक्षमा पार्न मतदातासामु विभिन्न प्रतिबद्धता लिएर घरदैलोमा व्यस्त देखिन्छन् । घोराही उपमहानगरपालिका गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा र नेकपा एमालेका तर्फबाट नरुलाल चौधरी मेयर पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । चौधरी निवर्तमान मेयर हुन् भने शर्मा पहिलो पटक मेयर पदका उम्मेदवार हुन् । मेयर पदका उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेन्डा तथा चुनावी प्रचारप्रसारको अभियानका बारेमा कारोबारकर्मी अमरराज आचार्यले गरेको कुराकानीको सार :
पाँच वर्षमा घोराहीको मुहार फेर्नेछौं
प्रमुख उम्मेदवार (घोराही उपमहानगरपालिका)
चुनावी प्रचारप्रसारको अभियान कसरी चलेको छ ?
वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको पाँचदलीय गठबन्धनले घोराही उपहानगरपालिकाको मेयर पदमा मलाई र उपमेयर पदमा भूपबहादुर डाँगीज्यूसहित वडा तहसम्म साझा उम्मेदवार अघि सारेको छ । हाम्रो चुनावी प्रचारका लागि पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा नभई गठबन्धनले तय गरेको चुनावी योजना र प्रचार कार्यक्रममा साझा ढंगले सहभागी भइरहेका छौं । वैशाखमा १५ गतेदेखि वडा नंं. ६ देखि चुनावी प्रचारप्रसार अभियान थालनी गरी अघि बढेका हौं । चुनावी प्रचारका क्रममा हरेक मतदाता र शुभेच्छुकहरूको घरदैलोमा पुग्न नसके पनि उहाँहरूले हामीले उठाएका एजेन्डाका आधारमा मतदान गरिदिनुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं । हरेक मतदाताहरूको घरदैलोमा नभए पनि गाउँटोलमा हुने चुनावी कार्यक्रममा सरिक भई उम्मेदवारहरूले साझा योजनासहितको प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत गरी उहाँहरूका समेत सुझाव लिँदै अघि बढिरहेका छौं ।
साझा गठबन्धनको चुनावी एजेन्डाहरू के के छन् ?
हामीले घोराही उपहानगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि केही विषयवस्तु प्राथमिकतामा राखेका छौं । गुणस्तरीय सीपमूलक शिक्षा र रोजगारी, स्वस्थ्य जीवनका लागि स्थानीय सरकार, वडावडासम्म उद्योग, दिगो विकासको आधार सडक पूर्वाधार, पानी जिन्दगानी नगरको लगानी, वैज्ञानिक भू–उपयोग तथा व्यवस्थित सहरी विकासको योजनाअघि सारेका छौं । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकास लागि नगरस्तरीय योजना, स्थानीय कला–संस्कृति, भाषा र मौलिक पहिचानका लागि विशेष योजना र अभियान, भ्रष्टाचारमुक्त घोराही, सार्वजनिक सेवामा सहज नागरिक पहुँच, जनताको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, दलित र अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्ग, समुदायका लागि विशेष अधिकार र राहत व्यवस्थाका लागि पनि स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यसैगरी युवा र खेलकुदको विकास, सूचना तथा सञ्चारको विकास, घोराहीलाई हिलोधूलोमुक्त नगरका रूपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहको केन्द्रसँग बाह्रै महिना सबै वडाको सहज यातायात पहुँचको व्यवस्था, अतिविपन्न, मजदुर, गरिब किसान, वृद्धवृद्धा, एकल महिलाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, विद्युत् र खानेपानी निःशुल्क व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै कृषकहरूलाई कृषक परिचयपत्र, मलबीउको सहज व्यवस्थापन, कृषक पेन्सनकोे व्यवस्था गरिनेछ । यसैगरी चोकचोक सार्वजनिक स्थलमा फ्री इन्टरनेट, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नर्सिङ र विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन सञ्चालन गर्ने र सरकारी विद्यालय तथा अस्पतालहरूलाई सुविधासम्पन्न गराउने र नगरस्तरीय सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना छ । विस्तृत साझा एजेन्डाहरू साझा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएकाले एकपटक हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र अध्ययन गरिदिनुहुन सबै उपमहानगरवासीमा अनुरोध गर्छु ।
गठबन्धनले घोराहीमा जित्ने आधार के–के हुन् ?
घोराहीमा उपहानगरपालिकामा गठबन्धनमा आबद्ध रहेका राजनीतिक दलहरूको जनाधार र कार्यकर्ताहरू नै हाम्रो जित्ने पहिलो आधार हो । यसअघिको निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गरेको मत संख्या मात्रै आधार मान्ने हो भन्ने हामीले १० हजारभन्दा बढी मतान्तरले विजयी हुन्छौं । यसबाहेक हामीले उठाएका एजेन्डा र अघि सारेका उम्मेदवार अनुहार नै हाम्रोको अर्काे आधार हो । यसैगरी संघ, प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सरकार छ । स्थानीय तहमा गठबन्धनको सरकार नहुने हो भने यहाँ चाहेजतिको विकास र समृद्धि घोराही उपहानगरपालिकामा हुन सक्दैन । त्यसैले केन्द्र र प्रदेशमा जसरी गठबन्धनको संयुक्त सरकार छ, त्यसरी नै घोराही पनि हामीले गठबन्धनको संयुक्त सक्षम नेतृत्वको सरकार भएमा केन्द्र र प्रदेश सरकारवाट पनि विकासका योजनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी यसअघि घोराहीमा नेतृत्व गर्नुभएका मेयरलाई नै पुनः उम्मेदवार उठाएको हुनाले उहाँ एकपटकको परीक्षणमा असफल भइसक्नुभएको छ । उहाँले गरेको चुनावी वाचाहरू पूरा गर्न नसक्नुभएकाले घोराहीवासी आम स्वतन्त्र मतदाताहरूले हामीलाई विजयी बनाउन आतुर हुनुहुन्छ ।
तर, तपैहरुको पार्टी र गठबन्धनभित्र आन्तरिक विवाद छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
घोराहीको गठबन्धनमा रहेका दलहरूको पार्टीमा विशाल कार्यकर्ता पंक्ति छ । थुप्रै सक्षम र योग्य नेता–कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ । सुरुमा उम्मेदवार चयन गर्ने क्रममा कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा उचित हुन्छ भनेर बहस हुनु, साथीहरूले मतहरू राख्नु स्वाभाविकै हो । घोराहीका मेयर र उपमेयर दुवै पदमा सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवारी चयन भएको छ । उम्मेदवारी चयन भइसकेपछि मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूका बारेमा एक जनाले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छैन । यसअघि मेयरको उम्मेदवार रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता भूपबहादुर डाँगी अहिले उपमेयरमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । हाम्रो संयुक्त गठबन्धनलाई जिताउन दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सबै एकताबद्ध भएर लागिरहनुभएको छ । हामी चुनावी अभियानमा अघि बढिसकेपछि पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकको दायित्व पार्टीका उम्मेदवार जिताउने हो । यस्तो बेला वादविवाद गरेर समय खेर फाल्ने समय हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरूलाई छैन । चुनाव सकेपछि हामीले समीक्षा गर्नेछौं । केही गल्ती भएको रहेछ भने त्यसबाट शिक्षा लिनेछौं । अहिले हामीमा खासै विवाद छैन । पार्टी निकट साथीहरूले निर्णयविपरीत हाल्नुभएको उम्मेदवारी पनि फिर्ता लिइरहनुभएको छ । अझै केही असन्तुष्टि रहेछन् भने पनि मतदान गर्नुअघिसम्म समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
तपाईंहरू निर्वाचित भएपछि आगामी पाँच वर्षमा घोराही कस्तो होला ?
हामी घोराहीवासीको भाग्य र भविष्य बदल्न उम्मेदवार बनेका हौं । हामीसँग आगामी पाँच वर्षमा घोराहीलाई कस्तो बनाउने भन्ने प्रस्ट योजनासहितको खाका छ । हाम्रो जितपश्चात् दिनरात नभनी घोराहीवासीको सेवा र यहाँको विकासका लागि खटिनेछौं । पाँच वर्षपछि तपाईंले देशको सबैभन्दा ठूलो यो उपमहानगरलाई घोराहीलाई देख्नुहुनेछ । नेपालको सबैभन्दा नमुना उपमहानगरपालिका बनाउनेछौं । हामीले अधुरो रिङरोड पूरा गरी प्रत्येक वडाका टोलटोललाई आधुनिक यातायात प्रणालीसँग जोड्नेछौं । विकट दुर्गम क्षेत्रहरू पनि छन् । जहाँ आकर्षक पर्यटक केन्द्र बन्नेछन् । बढ्दो बेरोजगारीलाई हटाउँदै घरघरमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । जनताका सबै प्रकारका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछन् । जनताको मौलिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका अधिकारको दायित्व उपमहानगरपालिकाले बेहोर्नेछ । समग्रमा भन्दा हामीले घोराहीको मुहार फेर्ने वाचा गरेका छौं, त्यो पूरा गरेरै छोड्नेछौं ।
जनतालाई आर्थिक सबलीकरणमा जोड्छौं
चुनावी अभियान कसरी चलेको छ ?
निर्वाचनको मिति नजिक आउँदै गर्दा विविध ढंगले चुनावी अभियानलाई अघि बढाइरहेका छौं । व्यक्तिगत भेटघाट, टोलमा भेटघाट एवं चुनावी सभाहरूमार्फत मतदाताहरूलाई भेट्ने र मत माग्ने काम भइरहेको छ । मतदाताहरूको सुझावलाई ग्रहण गर्दै र आफ्नो भावी योजनाहरू सुनाउने काम भइरहेको छ । समग्रमा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ ।
तपाईंका चुनावी एजेन्डा केके छन् ?
यसअघि मैले पाँचवर्षे कार्यकाल घोराही उपमहानगरको नेतृत्व सम्हालेर बिदा भएको छु । जसरी नगरवासीले अमूल्य मत दिएर नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा पु-याउनुभयो, उहाँहरूकै सल्लाह, सुझाव र मागका आधारमा योजनाहरू बनाएर काम गरें । भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपान्तरणमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएका छौं । फेरि एक कार्यकालका लागि मेरो पनि इच्छा र पार्टीले पनि दिएको जिम्मेवारीलाई अब जनताको समृद्धि र आर्थिक परिवर्तनमा केन्द्रित गरेर काम गर्ने सोच बनाएको छु । विशेष गरी नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउने नै महत्वपूर्ण कुरा हो । सडक, भवन, सिँचाइ, यातायात, सञ्चार, कुलानाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन आमूल परिवर्तन गरेका छौं । यसलाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै नागरिकको आय आर्जनसँग जोडिने खालका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अब स्वरोजगार बन्ने, कृषि, पशुपालनलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाउनतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइ क्रियाकलापलाई थप गुणस्तरीय बनाउने, विषयगत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तरवृद्धि गरी सर्वसुलभ तरिकाले गुणस्तरीय र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण गर्ने योजना छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अब नागरिकको आयस्तर बढाउने र सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने नै हो ।
जित्ने आधारहरू प्रशस्त छन् । एक कार्यकाल नगरको नेतृत्व गर्ने जुन जिम्मेवारी पाएँ त्यो जिम्मेवारी मैले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छु । यो नगरवासीले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ । कहींकतै विवादमा नआई नगरवासीको हितमा काम गरेको छु । सहर–बजारदेखि गाउँ जोड्ने सबै बस्तीमा सडक पु-याएको छु । कालोपत्रे सडकहरू सहरदेखि गाउँगाउँमा पुगेका छन् । किसानहरूलाई खेतीमा सहयोग पु-याउन तीन दर्जनभन्दा बढी कृत्रिम जलाशय निर्माण गरेका छौं । सबै वडाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा छ । सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी मिलानपछि विद्यार्थीको भरिभराउ र शिक्षण सिकाइमा परिवर्तन आएको छ । मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउनेहरूको उपचार र व्यवस्थान भएको छ । नगरलाई हरभरा बनाउने अभियान चलिरहेको छ भने छाडा पशु चौपायाको उचित व्यवस्थापन भएको छ । बालमैत्री नगर घोषणा गरेका छौं । ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममार्फत घरमै उपचार, मोतियाबिन्दुको निःशुल्क अप्रेसन, सुत्केरीलाई निःशुल्क रगत, सिकलसेलका बिरामीको निःशुल्क उपचार, आमा र बच्चाको पोषणलाई खुत्रुके कार्यक्रम, खेलकुदतर्फ रंगशालाहरूको निर्माण जारी छ भने १९ वटै वडामा खेलकुद मैदान बनेका छन् । फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरेका छौं र नगल्ने फोहोरसमेत बिक्री गर्दै छौं । ८३ वटा कानुन आफै बनाएर नागरिकहरूको सेवामा केन्द्रित भयौँ । यसरी हामीले नमुना कामहरू धेरै गरेका छौं । र जनताले पनि विश्वास गर्नुभएको छ । एक कार्यकाल फेरि मलाई नै भोट दिएर जिताउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
घोराहीमा के–कस्ता समस्या छन् ?
यहाँ खासै समस्या केही छैनन् । अलिकति समस्या के हो भने केन्द्र सरकारको मातहतमा पर्ने मुख्य सडकहरू लथालिंग हुँदा हामीले आलोचना खेप्नुपरेको छ । भूगोल हाम्रोमा पर्ने तर क्षेत्राधिकार हाम्रोमा नपर्दा काम गर्न अप्ठेरो भयो । सडक कार्यालय र फोरलेनले विभिन्न बहानामा आलटाल गर्ने र निर्माण व्यवसायीले समेत लापर्बाही गर्दा घोराही–लमही, घोराही–तुलसीपुर, घोराही–मुर्कुटी, घोराही–होलेरी सडकमा नागरिकले सास्ती पाउनुभएको छ । हामीले पटक–पटक खबरदारी गरेका छौं । तर, उनीहरूले काम गर्दैनन् र हाम्रो बदनाम गर्न खोज्दै छन् । हामी ग्राभेल गरेर केही सहज त बनाएका छौं तर मुख्य जिम्मेवारी भएका निकाय गैरजिम्मेवार बन्दा यो समस्या आएको हो । यस्तै प्रदेशको बजेट र नगरको बजेटबाट घोराहीका धारापानी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रोडमा पिचपूर्वको काम प्रदेशले गर्ने र कालोपत्रे नगरले गर्ने थियो । तर, उनीहरूले काममा ढिलाइ गर्दा पनि हामीलाई कालोपत्रे गर्न केही समस्या भएको छ । अन्य समस्या कुनै केही छैन ।
अब कस्तो उपमहानगर बनाउनु चाहनुहुन्छ ?
समृद्ध र स्मार्ट उपमहानगर बनाउने सोच छ । पूर्वाधारमा सबल, अर्थतन्त्रमा सक्षम र सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल नगर बनाउने हाम्रो योजना छ । नागरिकको जीवनस्तरलाई उच्च बनाउन उद्यम र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि तथा पशुपालनलगायतका व्यवसायका माध्यमबाट नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने, सबै बालबालिकालाई शिक्षित बनाउँदै लैजाने, युवाहरूलाई सीपयुक्त बनाउने योजना छ । घोराही उपमहानगरपालिका भन्दा सबै क्षेत्रले परिचय दिन सकिने खालको नगर बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।